Madaxweyne Shariif oo loo aqoonaday madaxweynaha ugu safarka jacel Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Madaxweyne Shariif oo loo aqoonaday madaxweynaha ugu safarka jacel Madaxweynaha dowladda KMG ee soomaaliya Sheekh Shariif ayaa loo aqoonsaday in uu yahay Madaxweynaha ugu safarka jacel Caalamka.
Madaxweynahii ugu Safar iyo Diyarad raaca jeclaa markii dibloo fiirsho Madaxweynayaashi Dalka Soomaaliya soo maray ama geeska Africa. Madaxweyne Sheikh Shariif ayaa la ogsoon yahay marka uu Diyaaradaha raacayo gaar ahaana u ka dhoofayo Gagida Diyaradaha Muqdisho in farxad aad u badani wajigiisa ku soo joogsato.
Shariif ayaa mar marka qaarkood isla qosla ama cidkasta ee indhihiisu ku dhacaan farxad darteed qosol ugu jawaaba .Ilaa marku ka baxayo halka uu ka degan yahay Magalada Muqdisho ee ah Villa Soomaaliya ila halka u ka dhoofo ee Adancade Airport.
Madaxweyneaha aya markii loo fiiriyo Madaxweynayasha Wadamada adduunka horey u marey uguna dhaqalaha badan sida Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama Raizul wasaraha Ingriiska David Camaron iyo China ama Russia in aysan sameyn safarada noocas oo kala ah ee bilkasta joogtada ah ayagoo awoodeeda leh qaar kamidana ay leeyihiin Diyarad u qaas ah meesha Sheikh Shariif bilkasta uu Diyaarad angeeyr ah qaato 6 ama 8 jeer isagoo aad uga hela Diyaaradaha ku safarkooda.
Ruuxa kaliya ee la tartami karaya safarada Sheikh Shariif ee xaga hawada ah ayaa loo aqoonsaday .Milkiilaha Shirkada Virgin Atlantic Richard Branson una dhashay wadanka Ingriiska. Isagoo ku duula diyaarad qaas u ah (Private Jet) Richard ayaaa la sheegay in u duulo safarkiisa ugu badan bishii 7 ama 5 jeer wa sida uu ka qoray journal Daily Express ee ka mid ah joornalada ka soo baxa wadanka Ingriiska.